Fitsipiky ny fitaterana ny oversized entana - Ny mpisolovava ao Shina. Shinoa rehetra ny mpisolovava an-tserasera.
Fitsipiky ny fitaterana ny oversized entana
Ity fizarana ity dia mamaritra ny antontan-taratasy fototra mifehy ny fitaterana ny oversized sy mavesatra entana fitaterana amin'ny lalamby mmIsika misahana ny lalamby ny fitaterana ny entana simba ao refrigerated fitoeran, ny fitaterana, ny ampahany simika sy ny sakafo ny vokatra amin'ny fiara fitoeran, ampahany entana manokana anaty kaontenera, fitoeran-javatra transportations, ny fitaterana, ny outsized entana sy ny kodiarana fitaovana, sy ny tetikasa entana. Dia ho azo antoka tanteraka ny lehilahy ny entana izahay nankinina: manomana sy mampihatra tandrify ny fitaterana rafitra sy ny faritany haleha izy, dia mandamina ny fomba amam-panao sy ny fahadiovana fombafomba, ny famonoana ny entana antontan-taratasy, Fikambanana stevedore miasa, raha ilaina, dia mandamina kafa fitehirizana ny entana ao amin'ny trano fanatobiana entana sy fiantohana. Faly izahay manolotra ny mpanjifa rehetra fitoeran-javatra tsy tapaka hampiofanana ny asa fanompoana, amin'ny maha-mpandraharaha amin'ny lalana avy amin'ny seranan-tsambon'i Ust-Luga - Moscow - seranan-tsambo ny Ust-Luga, miaraka amin'ny manaraka delivery avy amin'ny aro-fanina terminal ao Moskoa ny mpanjifa ny varavarana sy ny fiverenan'ny foana ny fitoeran-javatra amin'ny seranan-tsambon'i Ust Luga. Izany fanompoana izany dia mamela anao mba handefa ny fitoeran-javatra amin'ny roa terminal ao amin'ny seranan-tsambon'i Ust Luga - ULCT sy Atsimo IPC. Ny orinasa dia manolotra ny lalamby tariff fandoavam-bola ny tolotra ho an'ny entana nentina tao amin 'ny faritanin' ny Baltika States, ny Federasiona rosiana, Kazakhstan, any amin'ireo firenena ao amin'ny Azia Afovoany sy firenen-kafa-ny mpikambana ao CIS sy ny Vondrona Eoropeana. Fitoeran ny mpitarika ny global mpanamboatra mamela ny fihazonana na inona na inona ilaina ny fitondrana nandritra ny entana fitaterana. Ny nikodiadia ny orinasa SUNGATE ahitana ny telon-jato mety sehatra sy telo-polo diesel-kery niteraka fiaran-dalamby.
Fiarovana ny entana, ary ambonin'ny zavatra rehetra - fiarovana ny refrigerated entana no antoka mandritra ny fitaterana amin'ny avo azo antoka ny fitaovana. O SG Lalamby dia mpikambana ao amin'ny orinasa group"SUNGATE" Ny tena specialization dia fanomezana ny iray fonosana ny fandefasana ary ny nanatitra ny asa ao Kazakhstan.
Amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa hafa ao amin'ny vondrona, dia nandamina fiterahana ny cargoes avy any Eoropa, ny Shina sy Amerika ny mpandray ao Kazakhstan.
Azo antoka ny fiaraha-miasa dia iray amin'ireo fitsipika lehibe indrindra ao SUNGATE asa. Ny orinasa miasa amin'ny matihanina sy ny top-laharana mpitarika eo amin'ny sehatra maro. O SG Lalamby dia mpikambana ao amin'ny orinasa group"SUNGATE" Ny tena specialization dia fanomezana ny iray fonosana ny fandefasana ary ny nanatitra ny asa amin'ny Kazakhstan. Amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa hafa ao amin'ny vondrona, dia nandamina fiterahana ny cargoes avy any Eoropa, ny Shina sy Amerika ny mpandray ao Kazakhstan.
Дене серыш мыняр шогышо адвокат йодеш. Черетан статьяштыже